Kanada waxay qasab ka dhigtaa tallaalka waaxda gaadiidka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Kanada waxay qasab ka dhigtaa tallaalka waaxda gaadiidka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Laga bilaabo Oktoobar 30, 2021, dadka socotada ah ee ka dhoofaya garoomada diyaaradaha ee Kanada, iyo kuwa ku safra tareenada VIA Rail iyo Rocky Mountaineer, waxaa laga rabaa in si buuxda loo tallaalo, marka laga reebo aad u kooban.
Kanada waxay u baahan tahay tallaalka COVID-19 dhammaan adeegga dadweynaha ee federaalka iyo qaybaha gaadiidka ee federaalku nidaamiyay.
Raiisel wasaaraha, Justin Trudeau, iyo Raiisul Wasaare kuxigeenka, Chrystia Freeland, ayaa maanta ku dhawaaqay faahfaahinta qorshayaasha dowlada ee ah inay u baahan yihiin talaalka COVID-19.
Loo -shaqeeyayaasha qaybaha hawada, tareenka, iyo waaxda gaadiidka badda ee federaalku nidaamiso waxay lahaan doonaan ilaa Oktoobar 30, 2021 si ay u hoggaansamaan.
Laga soo bilaabo bilowgii masiibada COVID-19, waxaan samaynay ballanqaad ah inaan ilaalino caafimaadka iyo badbaadada dhammaan dadka Kanada. Taasi waa sababta aan ugu dadaalnay inaan bixino tallaallo ammaan ah oo wax -ku -ool ah oo aan u dhignay marxaladda soo -kabashada oo qof walba anfaca. Waxaan u mahadcelinayaa malaayiinta reer Kanada ee gacmahooda soo duubtay si ay u helaan tallaal, oo hadda boqolkiiba 82 ee Kanadiyaanka u qalma ay si buuxda u tallaalaan, Kanada waa hoggaamiye caalami ah tallaallada COVID-19. Maaddaama ay tahay loo shaqeeyaha ugu weyn ee dalka, Dowladda Kanada waxay sii wadi doontaa inay kaalin hoggaamineed ka qaadato ilaalinta badbaadada goobaha shaqada, bulshooyinkayaga, iyo dhammaan dadka reer Kanada iyadoo hubinaysa in inta ugu badan ee suurtogalka ah si buuxda loo tallaalo.
The Raiisel wasaare, Justin Trudeau, iyo Ra'iisul Wasaare Ku Xigeenka, Chrystia Freeland, ayaa maanta ku dhawaaqay faahfaahinta qorshayaasha dowladda ee ay u baahan tahay Tallaalka COVID-19 dhammaan adeegga dadweynaha ee federaalka iyo qaybaha gaadiidka ee federaalku nidaamiyay.
Siyaasadda cusub, shaqaalaha dawladda dhexe ee Maamulka Dadweynaha ee Muhiimka ah, oo ay ku jiraan xubnaha Royal Canadian Mounted Police, waxaa laga rabaa inay xaqiijiyaan heerka tallaalkooda marka la gaaro Oktoobar 29, 2021. Kuwa aan doonayn inay sheegaan xaaladda tallaalkooda ama inay si buuxda u noqdaan tallaalka waxaa lagu meeleyn doonaa fasax maamul oo aan mushaar la siin doonin laga bilaabo Nofeembar 15, 2021.
Loo -shaqeeyayaasha hawada federaalku nidaamiso, waaxyada gaadiidka tareenka, iyo badda ayaa lahaan doona ilaa Oktoobar 30, 2021, si loo dejiyo siyaasado tallaal oo hubiya in shaqaalaha la tallaalo. Laga bilaabo Oktoobar 30, 2021, dadka socotada ah ee ka dhoofaya garoomada diyaaradaha Kanada, iyo kuwa ku safra tareenada VIA Rail iyo Rocky Mountaineer, waxaa laga rabaa in si buuxda loo tallaalo, marka laga reebo aad u kooban. Dawladdu waxay la shaqeyneysaa warshadaha iyo la -hawlgalayaasha muhiimka ah si loo dejiyo shardi tallaal oo adag oo loogu talagalay maraakiibta dalxiiska ka hor inta aan dib loo bilaabin xilliga dalxiiska ee 2022.
Shirkadaha Crown -ka iyo wakaalado gooni ah ayaa laga codsanayaa inay hirgeliyaan siyaasadaha tallaalka oo ka turjumaya shuruudaha lagu dhawaaqay maanta inta ka dhiman adeegga dadweynaha. Ku -simaha Taliyaha Ciidanka Difaaca ayaa sidoo kale soo saari doona dardaaran u baahan tallaalka Ciidamada Qalabka Sida ee Canada. Dawladdu waxay sii wadi doontaa inay la shaqayso loo -shaqeeyayaasha goobaha shaqo ee kale ee dawladda dhexe nidaamiso si loo hubiyo in mudnaanta la siiyo tallaalka shaqaalaha qaybahaas.
Iyada oo looga baahan yahay tallaalka shaqaalaha dawladda federaalka, socotada, iyo shaqaalaha qaybaha gaadiidka ee federaalku nidaamiyay, Dawladda Kanada waxay yarayn doontaa halista COVID-19, waxay ka hortagtaa dillaaca mustaqbalka, waxayna si fiican u ilaalin doontaa caafimaadka dadka Kanada. Tallaalku wuxuu sii ahaanayaa mudnaanta dawladda maadaama aan ka shaqeyneyno sidii aan u xaqiijin lahayn soo kabasho dhaqaale oo xoog leh iyo inaan u dhisno Kanada qof walba ammaan iyo caafimaad.
Dadku waxay naftooda la cararaan markii volcano Java uu qarxo
Erdogan: Hadda ka dib waa 'Turkiye' ee maaha 'Turki'